Zibahlalise kabi izindlovu - Ilanga News
Home Izindaba Zibahlalise kabi izindlovu
Zibahlalise kabi izindlovu
Ziyazenzela emasimini ezinye zicanasa emizini yabantu
BANENGEBHE emphakathini waseMfihlweni, eManguzi, ngenxa yezindlovu okuthiwa zeqa umngcele ziphuma eMozambique, zigcaluza phakathi kwemizi yabantu nasemasimini. Ngokuthola kweLANGA, lezi zindlovu zihamba ziwumhlambi kazalusile kanti amalungu omphakathi akhulume naleli phephandaba aveze ukuthi zishiya zivithizile emasimini.
UMnu Mzikayifani Tembe oyilungu lo-mphakathi, uthi lezi silwane zimoshile ensimini yakhe.
“Kunzima lapha endaweni ngenxa yalezi zilwane ngoba kuyaziwa ukuthi ziyingozi ka-ngakanani. Ziyazenzela nje emasimini ethu. Okubi kakhulu wukuthi ezinye zazo zihamba naphakathi kwemizi, esingazi ukuthi kuyokwenzekani uma zihlangana nomuntu ebumnyameni,” kusho uMnu Tembe.
INkosi Mabhudu Tembe, okuyindawo engaphansi kwesizwe sayo le okubonakala kuyo lezi zindlovu, ithe isiphume umkhankaso wokuxwayisa umphakathi ngokuthi ungazitholi usuyizisulu zalezi zilwane. Ithi inezinsolo zokuthi zizwa amasondo nemikhondo lapho kwakuhamba khona ezinye izindlovu ngaphambi kokuba kufakwe ucingo oluwumngcele wala mazwe.
Itshele ILANGA ukuthi kungenzeka nokuthi zixhumana ngandlela thile nezinye ezivalelwe esiqiwini sakulesi sizwe, iTembe Elephant Park.
“Emasontweni amabili adlule kubonakale ezintathu, kwathi ezinsukwini ezimbalwa kwabonakala umhlambi weziwu-9. Lapho zidlule khona kusala kukhalwa ngoba phela zinyathela kubonakale. Ngokusho kwabadala, indlovu iyakwazi ukuxhumana nenye noma ngabe ikude ngo-50km, okunokwenzeka ukuthi nalezi zifuna ukuxhumana nezivalelwe lapha ekhaya. Ngokuthola kwethu, lezi zindlovu zaseMozambique kakuzona lezi ezivalelwayo, ngezasemahlathini.
“Mina nethimba engisebenza nalo, sesiphume umkhankaso wokuxwayisa umphakathi ukuba uqaphele ngoba ziyingozi lezi zilwane. Okwenza ngisukume wukuthi ngiyabazi abantu besizwe sikababa, kabafani, abanye banesibindi, kuyimanje babona
inyama engenamelusi. Lapha kubantu kunenkolelo yokuthi iningi lezitho zomzimba wendlovu lithaka imithi ekhulumayo. siyanxusa nje ukuba umphakathi ungalinge usondele kulezi zilwane ngoba ziyingozi.
“Yinto eyaziwa ngisho nayingane ukuthi uma indlovu isicasukile, ibulala konke okuphambi kwayo,” kusho iNkosi Tembe. Ithe udaba lwalezi zilwane isilubikile nasekomidini elibizwa ngeTransfrontier Park, elibhekelele ukuhlalisana nokuqinisekisa ubudlelwano phakathi kwesizwe sayo, yiMozambique neSwaziland.
Leli komidi lakhiwe yiMaputo Special Reserve, yiSwaziland National Conservation neKwaZulu-Natal Wildlife.
“Ike yaba khona le nkinga eminyakeni emibili eyedlule kodwa yabuye yalungiswa ngemuva kokuba kungenelele zona lezi zinhlaka ngoba zinabaxhasi bazo. Namanje sinalo ithemba lokuthi lezi zindlovu zizobanjwa zibekwe endaweni efanele ngoba kasibungabazi ubungozi bazo,”
kusho iNkosi Tembe.
Okhulumela I-Ezemvelo KZN Wildlife, uMnu Musa Mtambo, uthe bebengakayitholi imibiko ngalesi simo. Unxuse umphakathi ukuba ubambisane nobuholi bendawo ukuze kuzoxhunyanwa nezinhlaka ezifanele, zibanjwe lezi zilwane ngoba ziyingozi.
“Udaba lwazo sizolulungisa maduze ukuze siqinisekise ukuphepha komphakathi,” kuphetha uMnu Mtambo.
UMnu Lunga Ngqengelele okhulumela uMnyango wezobuDlelwano naManye amaZwe nokuXhumana, uthe umnyango wabo ungangenelela kulolu daba uma kuwukuthi kubikwa ukuthi lesi simo sibeka engcupheni ubudlelwano phakathi kwala mazwe.
Previous articleSekukubaqeqeshi beChiefs ngoBilliat
Next articleBabonge uShenge ngomhlaba